Kolombia: Pretran’ny Paroasy avy any Jongovito nandrara ny Fetiben’ny Olom-masina mpiahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2020 4:35 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Jona 2010)
Niparitaka ny vaovao ny 2 Jona 2010 fa namoaka didim-panjakana mandrara ny fankalazana ny fetiben'ny Olo-Masina Mpiahy ao San Pedro y San Pablo [es] (izay atao ny 29 Jona) ny pretra avy ao amin'ny paroasy Jongovito ao an-tanàndehiben'i San Juan de Pasto. Firenena manana fomba nentim-paharazana katolika matanjaka i Kolombia. Hita taratra izany amin'ny fahatokisana ny pretra ao anaty vondrom-piarahamonina, amin'ny asa ataon'izy ireo any amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra maro be, ary amin'ny hevitra izay avoakany momba ny olana mifandraika amin'ny fitantanana ny firenena. Tsy izy ireo ihany no mifehy mazava ho azy, mamela ny fahalalahana ara-pivavahana ny lalàm-panorenana Kolombiana, saingy tsy maintsy ekena fa mbola manana fitaomana matanjaka amin'ny sehatra ara-tsosialy sasany ny ambaratongampitondra fivavahana.
Avy hatrany dia niteraka fanehoan-kevitra tao amin'ny bilaogy La lógica de mi papá ( Ny Lojikan-dRaiko) io didy hitsivolana io. Tao, Madame_Web no nitanisa ny lahatsoratra avy amin'ny didy hitsivolana izay voalaza momba ny fandrarana etsy ambony [es]:
“Separar la fiesta patronal de todo acto que no contribuya en nada para la edificación de la persona humana y de la comunidad cristiana, como son: verbenas populares, festivales bailables y todo aquello que cause escándalo en las personas de bien.”
Androany misaotra an'i @Hecolehome aho fa eto am-pelatanako ny didy hitsivolana laharana faha 036/2010 avy amin'ny Diosezin'i Pasto, izay milaza fa:
“Atokàny ny fetibe amin'ny hetsika rehetra izay tsy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny olombelona sy ny vondrom-piarahamonina Kristiana, toy ny: fety ankalamanjana malaza, ny fetibe misy dihy sy zavatra hafa rehetra izay mitarika fihetsika mahamenatra avy amin'ny olona mendrika”
Naneho ny tsy fitovian-keviny tamin'ny fepetra i Madame_Web:
Ny tsy hankalazana ny fetiben'ny San Pedro sy San Pablo (…) no hevitra lehibe farany avy amin'ilay lehilahy resahina (ny pretran'ny paroasy). Aoka tsy ho hadinon'ny pretran'ny paroasy fa tsy fananany ny fiangonana sy ny olomasina… an'ny vondrom-piarahamonina Jongovito ireny izay mankalaza ny fetibe isan-taona ary manangana olona toa anao ihany, eny toa anao, izay tsy manan-kevitra mihitsy na dia ny kely aza.
Danzantes Jongovito – Pasto (Mpandihy tao Jongovito – Pasto) Sarin'ny Cátedra Qhapac Ñan, Universidad de Nariño, nahazoana alalana)
Navoaka tao amin'ny Twitter ihany koa ireo fanehoan-kevitra manohitra ny didy amin'ny ankapobeny, milaza fa maneho ny tantara sy ny kolontsain'ny vondrom-piarahamonina ny fetibe.
Nanoratra i Pastas (@Pastas):
Mametraka ny paikady miaraka amin'ny clancuytter hampianatra ny pretra avy any Pasto ny tantaran'ny fankalazana Saint Patron ao Nariño. Tsy maintsy hitory ny evanjely aminy isika.
Namaly ireo mpisera Twitter hafa ihany koa i Pastas izay nanontany hoe hatraiza ny fiantraikan'ny Fiangonana amin'ny vahoaka:
@Cyberjuan Matahotra loatra izy ireo. Nisy olona nifandray tamin'i @Hecolehome mba hahafahantsika manampy amin'ny famahana izany amin'ny alàlan'ny vondrona mpanao fanadihadiana
@mrmuller Claro paisano hay q sentar al obispo y aclararle la dinámica de las comunidades para q no imponga doctrinas de hace 500 años atras. 11:33 AM Jun 2nd via TweetDeck responding to mrmuller
@mrmuller Mazava ho azy ry mpiray tanindrazana fa mila mipetraka eo amin'ny toeran'ny eveka ianao ary manazava ny sain'ny vondrom-piarahamonina mba tsy hametrahany fotopampianarana tany amin'ny 500 taona lasa 11:33 maraina, 2 Jona tamin'ny alàlan'ny TweetDeck namaly an'i mrmuller
@miranchurito Si, yo soy calmada. Pero cosas como estas me sacan de casillas. Uno trabajando en pro del Patrimonio y vea… amin'ny 11:55 AM Jun 2nd via TweetDeck en respuesta a miranchurito
@miranchurito Eny, namana aho. Saingy mahavaky ny saiko izany zavatra izany. Misy miasa ho an'ny Vakoka ary jereo… amin'ny 11:55 maraina, 2 Jona tamin'ny alàlan'ny TweetDeck mamaly an'i miranchurito
Madame_web (@madame_web) said:
Hoy i Madame_web (@madame_web) hoe:
What is a proper person? I’m a proper person and I like scandal and festivals with dancing http://bit.ly/dfbLpi
Inona no atao hoe olona madio? Olona madio aho ary tiako ny tantara ratsy sy ny fetibe miaraka amin'ny fandihizana
Namaly i Mrmuller (@mrmuller), niresaka tamin'i @madame_web sy @Pastas hoe:
@madame_web @Pastas antenaina fa hanohitra izany izy ireo ary hahatakatra fa ny kolontsaina no zava-dehibe kokoa noho izay lazain'ny pretra
Ary farany, nanome horonantsary fampiroboroboana ny fetiben'i Jongovito [es] ny tranokala ofisialin'ny Fitantanan'ny Kominina.
Ary nampiseho santionany tamin'ireo dihy nandritra ny fetibe [es] ny fantsona Youtube ArturoBando: